Ogaden News Agency (ONA) – Xasuuqyo siwada jira ay u xuseen Jaaliyada Ogadeniya iyo Qowmiyadaha Oromada,Kefecho-Shekecho & Benshanguul oo ka dhacay London
Xasuuqyo siwada jira ay u xuseen Jaaliyada Ogadeniya iyo Qowmiyadaha Oromada,Kefecho-Shekecho & Benshanguul oo ka dhacay London
Posted by ONA Admin	/ May 25, 2014
Jaaliyada Ogadeniya ee London ayaa ka qeyb gashay kulan looga hadlayay Arrimaha Xuquuqul Insaanka Geeska Afrika, Shirkan oo ay isugu yimaadeen Qowmiyadaha guemsyiga iyo dulmiga gumeyiga ku hoos nool. Waxaana lagu xusay Xasuuqyada ay gumeysigu Woyanuhu kageysteen deegamadaas ay gumeystaan.
Xasuuqyada Laga hadlay waxaa kamida, Xasuuqi Wardheer 1994, Xasuuqi Gunagado, Xasuuqi Maxaabiista Qabridahar iyo Fool Jeex, Xasuuqi Qoriile iyo xasuuqyada waqtiyada kala gadisan sida joogtada ah loogu hayo shacabka Somalida Ogadeniya. Waxaa kale oo la xusay Xasuuqi Benshanguulka loo geystay sanadkii May 2002 iyo Xasuuqyo Oromada loo geystay.
Jaaliyada Ogadeniya oo ay u hadashay gabadh dhalinyaro ah oo soo bandhigtay xasuuqyada kala gadisan ee ka jira Ogadeniya. Saynab Xaaji Maxamed oo kamid ah ururka dhalinyarada OYSU ayaa halkaas kusoo bandhigtay barnaamij qodobeysan ooo ay kaga warantay xasuuqyadaas kore iyada oo bar bar dhigaysa xasuuqyada kale ee loo geysto qowmiyadaha Oromada, Benshaanguul, Oromada, Gambelaha, Shekecho iyo qowmiyadaha Abysinianku gumeytaan.
Jaaliyada Ogadeniya oo hormuud u ah isku xidhka Qowmiyadahan Abbysina gumeysato ayaa marar badan Shir si wada jir ah ugu qabta Magaalada London.
Shirkan Qodobada kasoo baxay waxaa kamid ah
In si wada jira loo soo saaro warbixino ka waramaya Tacadiyada Talsika Woyanuhu u geysto Shacabka Ogadeniya, Oromada, Beenshaanguulka, Kefecho, Gambela iyo dhamaan tacadiyada ay geystaan taliska Woyanuhuu.
In Banaanbax wada jira laqabto Banaanbaxaas oo dhici doona Bisha June.
In la xoojiyo wada shaqeynta Qowmiyadahaas wadamada kale ee ree galbeedkana laga hirgaliyo xidhiidhka noocan oo kale ah.